Firenena ao amin'ny baolina kitra i Arzantina , tango mahavariana, karakarivony manintona, natiora mahafinaritra ary tsangambato maro sy tantara marobe. Mampifangaro tsara ny toerana goavam-be sy tanàna mangina, ireo tendrony mipoitra amin'ny lanezy sy ny toeram-pivarotana mafana amin'ny fasika loko matevina eny amoron-dranomasina. Izany no antony mahatonga ny araben'i Arzantina ho malaza eo anivon'ireo olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ary amin'ity fandinihana ity no handinihantsika ny ankamaroan'izy ireo.
Toerana fitetezam-paritra any Arzantina
Ny toeram-pizahantany any Arzantina dia manolotra fialantsasatry ny torapasika ny vahiny. Ny arabe marobe indrindra any Arzantina dia:
Mar del Plata. Seranan-tsambo lehibe eo amin'ny morontsirak'i Atlantika izany. Tao no niorina ilay tranokala voalohany an'i Arzantina, ary efa ela ny tanàna no heverina fa toeran'ny Eoropeana. Ny fasika ao amin'io toeranan'i Arzantina io dia madio, fotsy, tsy misy dikany ny akorandriaka sy vato. Maro ireo valan-javaboary no miorina eo amin'ny moron-dranomasin'i Mar del Plata, ary misy trano fisakafoanana sy fivarotana maro ao an-tanàna.
Miramar (Miramar) - toerana akaikin'ny lagoon an'ny La Beleneera, voahodidin'ny ala mikitroka. Ny mpankafy ny fanjonoana fanatanjahantena sy ny fialam-boly tafahoatra dia nifidy ity toerana mahafinaritra ity. Ao an-tanàna, misokatra ny klioba "Miramar", izay aorian'ny fampiofanana dia afaka manao dia lavitra amin'ny fiaramanidina ao amin'ny orinasa mpampianatra. Misy trano fisakafoanana tsara ao an-tanàna, izay misy karazan-tsakafo samihafa miaraka amin'ny zava-manitra ao an-toerana, voankazo amin'ny gilasy, ary ny trondro dia ny zava-pisotro nasionalin'i Arzantina.
Cariló no toeram-pialan-tsavony mahafinaritra any Argentina, any amin'ny morontsiraka Atlantika ao amin'ny faritanin'i Buenos Aires . Io toeram-pitsangatsanganana io dia mety ho an'ny mpifankatia miala sasatra, miala sasatra, ary koa hijanona eto miaraka amin'ny ankizy. Tany aloha tany, ny faritanin'i Karilo dia nisokatra fotsiny tamin'ireo olo-malaza sy manan-karena, fa ankehitriny ny fitsidihana an'i Karilo dia nafahana. Na izany aza, avo lenta ny vidiny eto, fa tsy ny rehetra no afaka mividy fialan-tsasatra toy izany. Any afovoan-tanàna ianao dia afaka mandeha any amin'ny toeram-pivarotana marobe, mitsidiha iray amin'ny trano fisakafoanana mahazatra na mandehandeha any anaty ala artificielle. Ny mpankafy ny fahatsapana tafahoatra, Karilo dia afaka manolotra fialam-boly toy izany amin'ny diany amin'ny bisikileta efa-bolana eo ambonin'ny dongom-pasika, sambo ski, fitaterana sy rivodoza.
Nechecea dia tanàna manodidina ny toerana misy an'i Tres-Airlos sy Mar del Plata. Ny fitsaharana eto dia heverina fa teti-bola, saingy, na dia eo aza ny fahafaha-mitsidika, ny toeram-ponenana Necochea dia manana fotodrafitrasa azo antoka (safidy tsara amin'ny hotely , trano fisakafoanana ary fialamboly). Mihazakazaka mihoatra ny 74 km ny tsipiky ny torapasika.
Beagle Strait - toerana fitsangatsanganana any Argentine dia tsara ho an'ireo mpankafy mpandihy izay hankasitraka ireo mponina maro ao amin'ny ranomasimbe ary ny toeran-tsarobidin'ity toerana ity dia ny sambo "Monte Cervantes".
Tsy ampy ny fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra any Arzantina , ao anatin'ity famerenana ity no ahafahantsika miresaka afa-tsy ny malaza indrindra amin'izany
San Carlos de Bariloche no toeram-piaramanidina lehibe indrindra tsy any Argentina, fa manerana an'i Amerika Atsimo. Ny toeram-ponenana dia manana làlana 50 amin'ny fahasamihafana samihafa, toeram-piofanana 38, manodidina ny hotely roa sy trano fandraisam-bahiny 2, ary koa trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana maro. Ny toeram-pitsangatsanganana dia misy serivisy fanofana, misy mpampianatra, mba hahafahan'ny olon-kafa eto ho an'ny mpivady manana zanaka.
Chapelko - resort skiing ao Arzantina, any amin'ny faritanin'i Neuquén . Ny velaran'io toeram-ponenana io dia 1,6 arivo hektara, misy pistolaly miisa 25 sy 12 fiandrasana amin'ny ski. Misy koa ny lalana tsy mitongilana 3, oram-panala. Ny toeram-ponenana ao Chapelco ihany koa dia manolotra fanofanana fitaovana, mpanampy amin'ny fampiofanana, fikarakarana ny zaza, ny mety hisian'ny alikaola sy ny maro hafa.
Ny toeram-pisakafoanana any Las Lenias dia ao amin'ny faritanin'i Argentina Mendoza . Misy fiaramanidina 30 sy fiarandalamby miisa 13. Ankoatra ireo asa fototra, i Las Lenias dia malaza amin'ny foto-drafitr'asa niorenany: misy trano fisakafoanana marobe, toeram-pamokarana sns ... Ny toeram-pitsangatsanganana dia miasa mandritra ny vanin-taona, manolotra ny vahiny ho any an-tendrombohitra miaraka amin'ny fiaramanidina na fiarandalamby.
Ny toeram-pizahantany ao Cerro Castor dia hita ao amin'ny nosy Tierra del Fuego . Misy fiaramanidina miisa 650 sy fiarandalamby 11 amin'ny fotoana iray. Ankoatra izany, nalaza ny fiarandalamby sy ny lakandranon'i Quad ilay toeram-pitsangatsanganana.
Ny toeram-pialan-tsambo ao La Hoya dia toeram-ponenana tranainy indrindra ao Arzantina, ao amin'ny faritanin'i Chubut akaikin'ny tanànan'i Escuel. Ny toeram-ponenana dia manana làlan-kaleha 29 ho an'ny skiing, fiarandalamby lamasinina 10, snowpark. Ankoatry ny fiaramanidina an-tendrombohitra, dia misy ny fisian'ny skiing amin'ny snowboards, mandeha ivelan'ny fiarandalamby, ary koa ny boardercross.
Amin'ny firy no tsara kokoa ny mitsidika ny vohitr'i Arzantina?
Raha manomana fialan-tsasatry ny torapasika any Arzantina ianao, dia ny fotoana tsara indrindra hanaovana vakansy dia ny volana Novambra ka hatramin'ny martsa. Any amin'ny toeram-pialan-tsasatry ny firenena dia manomboka amin'ny volana Jona ny fahavaratra ary mifarana amin'ny volana Oktobra.
Ampicillin - famantarana ny fampiasana
Ny tsiron'ny tiroidin'ny tiroida - fitsaboana
Focaccia miaraka amin'ny fromazy
Toeram-ponenana sy ratra an-jatony
8 Printsy Disney dia "nanandrana" ny sarin'i Kim Kardashian
Marsala loko akanjo
Dresses avy amin'ny chiffon ho an'ny vehivavy 50 taona
Ahoana ny fomba hanaovana ny seza amin'ny tananao?
Nahoana no nanonofy ny filoha?
Fialana amin'ny uretra amin'ny vehivavy
Ny fihoaram-pefy eo amin'ny tendany ve ny faharatsiana na ny aretina?
Firafitry ny poeta
Volokano elektrika natsangana
Nahoana ny vehivavy no manonofy bitro?